आज राति नर्विच सिटी र बर्नलेबीच खेलहुने
२ जेष्ठ २०७९, सोमवार
जनता भ्वाइस calendar_today ३ साउन २०७७, 1:21 pm
काठमाडौं । इंङलिस प्रिमियर लिगमा आज एक खेल हुदै छ । खेल नेपाली समय अनुसार राति सवा १० बजेबाट हुनेछ । खेल नर्विच सिटी र बर्नलेबीच खेल हुँदैछ । नर्विच सिटी लिगबाट घटुवा भइसकेको छ भने बर्नलेको ३६ खेलबाट ५१ अंक रहेको छ ।
यसअघि, गएराति भएको खेलमा वेष्ट ह्याम युनाइटेड विजयी भएको छ ।
रेलिगेशनबाट बच्न संघर्षरत युनाइटेडलाई गएरातिको जितले ठूलो राहत दिएको छ ।file Photo
उमाकुण्ड खुल्ला वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि बाम्तीको पोल्टोमा
मन्थली नगर स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड मन्थली माविकै पोल्टोमा
रामेछापमा फुटबल लिग हुने,आयोजकले खेलाडीहरुको एक लाखको बिमा गरिदिने
दोरम्बा खुल्ला भलिबलको उपाधी सुनापती १ गुन्सीको पोल्टामा
मन्थली नगरपालिका वडा नं १ मन्थलीको वडा अध्यक्षमा काँग्रेसको होमप्रसाद पौडेल (रामहरि) विजय
जनता भ्वाइस calendar_today १ जेष्ठ २०७९, 6:29 am
रामेछाप । मन्थली नगरपालिका वडा नं १ मन्थलीको वडा अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसको होमप्रसाद पौडेल (रामहरि) विजय भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मन्थलीका आनुसार पौडेलले नेकपा एमाले वडाध्यक्षका उम्मेदवार दिनेश सुवेदीलाई १३६ मतान्तरले जितेका हुन ।
काँग्रेसबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित पौडेलले ९२० मत प्राप्त गरे भने एमालेका उम्मेदवार सुवेदीले ७८४ मत प्राप्त गरे ।
यस्तै महिला सदस्यमा नेपाली काँग्रेसबाट तिजकुमारी भुजेल, दलित महिला सदस्यमा नेकपा एमालेबाट सीता सार्की, सदस्यमा काँग्रेसबाट चन्द्रबहादुर माझी र एमालेबाट रामकुमार माझि निर्वाचित भएका छन् ।
उमाकुण्ड १ र लिखुतामाकोसी १ मा एमालेको प्यानलनै बिजयी
जनता भ्वाइस calendar_today १ जेष्ठ २०७९, 6:27 am
रामेछाप । जि्ल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नं १ गुम्देल र लिखुतामाकोसी गाउँपालिका वडा नं १ दुरागाउँमा नेकपा एमालेको प्यानलनै बिजयी भएको छ ।
उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नं १ मा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई हराउँदै वडा अध्यक्षमा एमालेका ङावातिण्डु शेर्पाको प्यानल नै निर्वाचित भएको छ ।
लिखुतामाकोसी गाउपालिका १ दुरागाउँमा पनि काँग्रेसका उम्मेदवारलाई हराउँदै वडा अध्यक्षमा प्रदिप कुमार तामाङको प्यानल नै बिजय भएकोछ ।
रामेछापको गोकुलगंगा १ चुचुरेबाट काँग्रेसले खाता खोल्यो
Kumar Shrestha calendar_today ३१ बैशाख २०७९, 9:47 am
रामेछाप । रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका वडानम्बर १ चुचुरेमा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ । यो सँगै नरपाली काँग्रेसले रामेछापमा बिजयको खाता खोलेको छ ।
नेपाली काँग्रेसकाका छत्रबहादुर बस्नेत ७१५ मतका साथ बिजयी भएका हुन् । चुचुरेमा नेपाली काँग्रेसको प्यानल नै बिजयी भएका छन् ।
निकतम प्रतिद्वन्दी एमालेका रामजी कार्कीले ६१९ मत पाएका छन् ।
रामेछाप नगरपालिकामा मतगणना हुन सकेन,गोठगाउँको विवादले मतगणना प्रभावित
Kumar Shrestha calendar_today ३१ बैशाख २०७९, 8:27 am
रामेछाप नगरपालिका वडा नं १ बाट हिजो मतपेटिका ल्याउने क्रममा मतपेटिका बोकेको गाडी दुर्घटना भएको थियो । उक्त दुर्घटनामा ३ जना सामान्य घाइते भएका थिए । दुर्घटना भएको गाडीमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतसँगै नफर्कीएर सुरक्षाकर्मी मात्रै फर्कनुले घटना रहस्यमय र झालझेल रहेको भन्दै एमाले र माओवादीले मतगणना गर्न नदिने वताएका छन । राजनीति दलहरुले सेटिङमै घटना घटाएको भन्दै चित्त बुझ्दो जवाफ मतदान अधिकृतले नदिएसम्म मतगणना गर्न नदिने बताएका छ्न । सहमतिको प्रयास भैरहेको छ ।
रामेछापमा हवाई फाएर, चार मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगीत
जनता भ्वाइस calendar_today ३० बैशाख २०७९, 5:35 am
रामेछाप । जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नं.१ राकाथुमको मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता बिच झडप हुँदा मतदान स्थगित भएको हो ।
दुई पार्टीका कार्यकर्ताहरु बिच झडप हुँदा प्रहरीले स्थितीलाई नियन्त्रण लिन ७ राउन्ड हवाई फाएर गरेको थियो । अहिले उक्त मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगीत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायव उपरिक्षक राजकुमार थिङले बताए ।
त्यसैगरी खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नं. ५ पकरवास मतदान केन्द्रमा मतदाता को नाम नमिलेको भन्दै विवाद हुँदा अहिले उक्त केन्द्रको मतदान प्रक्रिया पनि स्थगित भएको रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पहाडीले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी दोरम्वा शैलुङ्ग गाउँपालिकाको मानपुर मावि मतदान केन्द्रमा पनि दुई पक्षिय झडप हुँदा प्रहरीले स्थिती नियन्त्रण लिन १ राउण्ड हवाई फायर गरेको छ । सो मतदान केन्द्रमा पनि अहिले मतदान प्रक्रिया स्थगीत भएको छ ।
त्यस्तै मन्थली नगरपालिका–१२ गेलुको सिक्राल मतदान स्थलमा पनि झडप हुँदा प्रहरीले ३ राउन्ड हवाई फाएर गरेको छ । अहिले उक्त मतदान केन्द्रमा पनि मतदान प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।
कुबुकास्थलीमा राप्रपा र एमालेद्वारा कांग्रेसका वडा अध्यक्ष माथि खुकुरी प्रहार
Kumar Shrestha calendar_today २९ बैशाख २०७९, 3:37 am
रामेछाप । रामेछापमा वडा अध्यक्षका उम्मेदवार माथि खुकुरी प्रहार भएको छ । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नं ३ कुँबुकास्थलीमा राप्रपा नेपाल र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुले नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार रमेशकुमार सुनुवारलाई खुकुरी प्रहार गरेका छन् ।
वडा अध्यक्षका उम्मेदवार सुनुवार गम्भीर घाइते भएको नेपाल तरुण दल उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष सम्शेर कार्कीले बताए । उनका अनुसार वडाका वडा अध्यक्ष समेत रहेका सुनुवारलाई राप्रपा र एमालेका कार्यकर्ताले पछाडिबाट झुक्याएर खुकुरी प्रहार गरेका थिए । गम्भीर घाइते सुनुवारलाई वडा नं २ बाम्तीको बाम्ति अस्पतालमा लगिएको छ ।
खुकुरी प्रहार गर्ने पबित्र सुनुवार सहित केही कार्यकर्ता प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घटना बारे थप अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
रामेछापको बिजुलिकोटमा एमालेले बाड्न ल्याएको मल प्रहरीको नियन्त्रणमा
जनता भ्वाइस calendar_today २६ बैशाख २०७९, 12:34 pm
रामेछाप । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी नेकपा एमालेले रामेछापको लिखु तामामाकोशी गाउँपालिकाको विजुलीकोटमा १ ट्रक रासायनिक मल पुर्‍याए पछि स्थानीयले कव्जा गरि प्रहरीको जिम्मा लगाएका छन् ।
विजुलीकोटको भुमेडाडामा पुर्‍याएको डिएपी र युरिया गरी करिव १ सय बोरा मल नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय धोविमा बुझाइएको स्थानियले बताए ।
नियन्त्रणमा लिइएको मल कसले र कहाँका लागि ल्याएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायव उपरिक्षक राजकुमार थिङले बताए । मल ल्याएको कागज पत्र सहित चालक फरार भएको बेला प्रहरी पुगेकाले पनि उक्त मल थप रहस्यको विषय भएको थिङ बताउँछन । ‘सुरुमा जानकारी आउदा एमालेले मल ल्यायो भन्ने सुन्नमा आएको हो ’ प्रनाउ थिङले भने तर त्यस बारेमा पुष्टि भइसकेको छैन, हामी वुझ्ने क्रममा छौं ।
मलको गाडि सगैं पक्राउ परेका चालकले आफु तिल्पुङबाट मात्र चालक भएर आएकाले असली चालक आफु नभएको वताएका छन् । ट्रक र मलको विल लगाएतका कागजात नभेटिएकोले उक्त मल राजश्व छलेर ल्याएको हुन सक्ने तर्फ प्रहरीले अनुसन्धान अघी बढाउने भएको छ ।
श्रेणी बिहिन कर्मचारीको मातहतमा खटाईयो प्रावि दृतिय तहका शिक्षकहरू
Kumar Shrestha calendar_today २२ बैशाख २०७९, 11:38 am
यहि बैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा खटाइएका शिक्षक कर्मचारी व्यवस्थापनप्रति रामेछापमा क्रियाशिल शिक्षकका पेशागत संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा शिक्षकहरुको मान सम्मान आँच पुग्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएकोमा असहमती जाहेर
गर्दै उनिहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मन्थली रामेछापमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
बुधबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रामेछापले निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटाएका कर्मचारीहरूमा प्रावि दृतिय तहका शिक्षकहरूलाई १४ वटा मतदान केन्द्रमा श्रेणी बिहिन कर्मचारीहरूको मातहतमा रहने गरि सहायक कर्मचारीको रुपमा खटाएको कारण शिक्षहरूले आफ्नो मानमर्दन भएको भन्दै आफ्ना संगठनहरू समक्ष गुनासो राखेका थिए । सोहि आधारमा जिल्ला स्थित बिभिन्न पेशागत शिक्षक संघ संगठनका प्रमुख तथा प।रतिनिधिहरूको बैठक बसि निर्वाचन कार्यालयको उक्त निर्णय बिरुद्ध ध्यानाकर्षणपत्र बुझाईएको हो ।
उक्त पत्रमा शिक्षकहरुको तहगत र श्रेणीगत स्तरलाई वेवास्ता गरी तोकिएको जिम्मेवारीले शिक्षकहरुको स्वाभिमान गिराएको शिक्षक संघ संगठनहरू ठहर छ । यसरी हठात् मनोवल गिराउने कार्यले आम शिक्षकहरू चिन्तित रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउदै शिक्षक संघ संगठनहरूले कर्मचारी व्यवस्थापनमा शिक्षकको मान सम्मानमा आँच नपुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत माग गरेका छन् ।माग पुरा नभएको खण्डमा शिक्षकहरु तोकिएको कार्य क्षेत्रमा गई कार्य सम्पादन गर्न वाध्य नहुने समेत पत्रमा लेखिएको छ । पत्रमा भनिएको छ यदि निर्वाचन कार्यालयले शिक्षकहरूको संघसंठनले गरेको माग पुरा नगरे यसवाट पर्न सक्ने असरप्रति सम्वन्धितनिकाय नै पूर्ण जिम्मेवार रहने छ ।
ध्याकर्षण पत्रमा केन्द्रीय सदस्य एवं वागमती प्रदेश ने. रा शि संगठन ,अध्यक्ष नीर वहादुर कार्की, केन्द्रीय सदस्य एवं एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन रामेछाप अध्यक्ष सोम प्रसाद भट्टराई, अर्थ महासचिव वागमती प्रदेश ने. शि.संघकी कमला थापा, ने शि. महासंघ रामेछापका सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ, ने. रा शि संगठन रामेछापका अध्यक्ष केशर वहादुर श्रेष्ठ, नेपाल शिक्षक संघ रामेछापका का. वा. अध्यक्ष प्रविणा पौडेल लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिवाकर भट्टले कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कमजोरी भएको भन्दै त्यसलाई सच्याएर कार्यालय अगाडी बढ्न तयार रहेको बताए । उनले भने- हामी सबैले काम गर्दा जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले काम गर्न पर्ने हो । हाम्रा संयन्त्रहरूको गैरजिम्मेवारीपनका कारण यो अवस्था आएको हो । तसर्थ यसलाई हामीले सच्याउने निर्णय गरिसकेका छौँ ।
मन्थलीमा माईक्रो दुर्घटना, १० जना घाईते , २ को अवस्था गम्भिर
जनता भ्वाइस calendar_today २१ बैशाख २०७९, 11:02 am
रामेछाप । मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर ६ सेलेघाटमा माईक्रोवस दुर्घटना हुँदा १० जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्य २ जनाको अवस्था गम्भिर रहेको छ ।
दिउसो करीब १:३० बजे काठमाण्डौं बाट मन्थली तर्फ आउदै गरेको बा २ ख ४१८० नम्बरको माइक्रोवस सडक बाट करिब २० मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी निरीक्षक राजु प्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
घाइतेहरुको तत्काल उद्धार गरी सिन्धुलीको खुर्कोटमा रहेको शुभजिवन अस्पताल र सुनकोशी सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराइरहेको प्रहरी निरीक्षक ढकालले जानकारी दिए ।
घाइते मध्य रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका– १ बस्ने बर्ष ३७ वर्षकी सविना मोक्तान र मन्थली नगरपालिका –५ का ३७ बर्षका सिताराम कार्कीको अवस्था गम्भिर छ । उनीहरुको खुर्कोटको शुभजिवन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अन्य आठ जनाको अवस्था समान्य रहेको छ । उनीहरुको पनी शुभजिवन अस्पताल र सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुर्कोटमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । मन्थली नगरपालिका–४ सालु बस्ने चालक नारद खड्का भने फरार रहेकोले खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
एमालेको रामेछापको चुनावि प्रतिबद्धता सार्वजनिक
Kumar Shrestha calendar_today २१ बैशाख २०७९, 10:43 am
रामेछाप । नेकपा एमाले रामेछापले पार्टिको तर्फबाट प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । “सामाजिक न्याय सन्तुलित विकास र सुशासनमा जोड” दिंदै बधबार सदरमुकाम मन्थलीमा पत्रकार सम्मलनको आयोजना गरि एमाले आफ्नो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दे एमाले जिल्ला अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले पत्रकारका माझ आफनो पर्टिले जिम्मेवारपूर्वक जनता माझ जान चाहेको भन्दै पार्टि सरकारमा रहदा विगतमा गरेका राम्रा काम र भावि कार्ययोजनाहरुलाई पनि प्रतिबद्धता पत्र मार्फत सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराए ।
नजिकिदै गरेको स्थानिय निकायको निर्वाचनलाई लक्षित गरि ल्याईएको प्रतिबद्धतापत्रमा जिल्लाका सबै स्थानिय निकायहरुको दिर्घकालीन विकास र तिनको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला पार्टिको तर्फबाट जारी गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा शिक्षा,स्वास्थ कृषि,खानेपानी,याताायतको दिगो विकास स्वरोजगार देखि शुसासन सम्म गरि करिब २० वटा बुँदा लाई समावेश गरिएको छ । उक्त बुंदामा आफना उमेद्वारहरुले विजयी भएको खण्डमा आगामि ५ बर्षमा गरिने कार्य योजना सहितको स्पष्ट खाका तयार गरिएको छ ।
सामाजिक न्याय,सन्तुलित विकाश,संबृद्धि र शुसासनका लागि नेकपा एमालेलाई मतदान भन्ने मुल नारा सहित एमालेले तय गरेको १९ पेज लामो प्रतिबद्धता पत्रमा उसले सबै शिर्षकको बुँदागत रुपमा ब्याख्या गरेको छ । जस अनुसार उसले तय गरेका मुख्य शिर्षकमा स्थानिय तहको पुर्वाधार विकाश र सेवा प्रर्वाह,शिक्षा तथा शैक्षिक पुर्वाधार,स्वास्थ र पोषण,खानेपानी,सडक पुर्वाधार ,विद्युतिकरण र आधुनिक उर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाई,र कृषिको विकास र आधुनिकिकरणमा जोड दिएको छ ।
त्यसैगरि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार र ब्यवस्थापन,बन वाताबरण तथा विपद् ब्यवस्थापन,उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति भुकम्प पछिको पुनः निर्माण र ब्यवस्थापन भुमि ब्यवस्थापन र शहरी विकास र बस्ति विकास,पर्यटन पर्वद्धन,सामाजिक संंघ संस्थाको ब्यवस्थापन बैक वित्तिय सस्थाको उचित ब्यवस्थापन देखि शुसासन सम्मका कुराहरुलाई पनि उसले आफनो घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
विगत ५ बर्षेमा आफना जन प्रतिनिधिले गरेको कामको अनुभबका आधारमा उसले आगामि दिनमा आफना तर्फबाट जितेका सबै जनप्रतिनिधिहरुले मनोपली ढंगले काम गर्न नपाउने भन्दै उनिहरुले पार्टिले तय गरेको प्रतिबद्धता पत्रलाई मुल आधार बनाएर काम गर्ने निति पार्टिले अबलम्बन गर्न लागेको जानकारी पनि एमालेले पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरायो । प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दे अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले विगतका कमि कम्जोरी मार्फत शिक्षा प्राप्ती गरेको एमाले जनजीविकाका सवालमा गम्भिर र जिम्मेवार रहेको भन्दै त्यसको बास्तविक कार्यान्वयन र स्थानिय निकायको दिगो विकासका लागि पनि प्रतिबद्धता पत्र जिल्लाको दिघो विकासका लागि कोशे ढुंगा सावित हुने विश्वास पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले गरे ।
पार्टिबाट जितेको कतिपय जनप्रतिनिधिहरुको ब्यवहारले विगतमा एमालेले पनि ठुलो अपजस भोग्नु परेकोले एमाले पार्टिले पनि विगतको समिक्षा र आगामी ५ बर्षमा आफना मतदाताहरुलाई आर्कर्षित गराउने खालका सकरात्मक नितिहरुलाई पनि आफनो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
मन्थली नगरका एमालेका उम्मेदवार चुनाबी अभियानमा व्यस्त
जनता भ्वाइस calendar_today २१ बैशाख २०७९, 6:23 am
रामेछाप ।यहि वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा एमालेको तर्फबाट मेयर पदमा उम्मेदवार लब श्रेष्ठ र उपमेयरका उम्मेदवार इश्वरी बस्नेत चुनावी अभियानमा व्यस्त देखिएका छन् ।
श्रेष्ठले मन्थली नगरपालिकाको विकास, ऐतिहासिक तथा पूरातात्विक सम्पदाको संरक्षण, विश्व स्तरीय सञ्चार प्रविधिमार्फत काममा सहजता लगायतका काममा आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताएका छन् । सबै वडाबासीले घरबाट नै बिजुलीको शुल्क, खानेपानीको पहुँच पुगेका ठाउँहरुमा खानेपानीको शुल्क, जग्गाको तिरो लगायतका सेवा शुल्क तिर्न सक्ने वातावरण बनाउने र तत्कालका लागि कम्तीमा वडाबाट यो सेवाको सुरुवात गर्ने लक्ष्य रहेको श्रेष्ठले बताएका छन् ।
खाँडादेवी र दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकामा कांग्रेस र नेकपा माओवादीको तालमेल
जनता भ्वाइस calendar_today १७ बैशाख २०७९, 10:41 am
रामेछाप । खाँडादेवी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरेको छ ।गठबन्धन विच चुनावी तालमेल नसके पछि काऊग्रेस र माओबादीले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिएको थियो ।
तर पुनः १६ गते कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बिच चुनावी तालमेल गरेर अगी बढ्ने निर्णय भएको छ ।
कांग्रेस बाट अध्यक्षको उम्मेरदवारलाई माओवादीले सर्मथन गर्ने र माओवादीको उम्मेदवारलाई कांग्रेसले सहयोग गर्ने गरी चुनावी तालमेल भएको नेपाली कांग्रेसका महाधिबेसन प्रतिनिधी रत्तनहरी ढुङ्गेलले जानकारी दिए ।
कांग्रेसबाट अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका नवराज थोकर र माओवादीबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार मान बहादुर लामाले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा निर्वाचनमा दुवै पार्टीले साझा उम्मेदवारलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । शुक्रबार भएको सहमति अनुसार गठबन्धनको चाहना र भावना अनुसार चुनाव जिताउने गरी दुवै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै गरी दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिकामा पनी चुनावी तालमेल भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसले उपाध्यक्ष लिने गरी सहमती भएको हो । माओवादी केन्द्र बाट अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका मैन कुमार मुक्तानलाई नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्ने र नेपाली कांग्रेस बाट उपाध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका खमला मगरलाई माओवादी केन्द्रले सहयोग गर्ने गरी सहमती भएको माओवादी बाट अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष मैन कुमार मुक्तान मदनले जानकारी दिए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी – समृद्ध नगरवासीको जिन्दगानी – लबश्री न्यौपाने
जनता भ्वाइस calendar_today १७ बैशाख २०७९, 9:38 am
रामेछाप । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख पदका उमेद्वार लबश्री न्यौपानेले शिक्षाको विकास विना अन्य कुनै पनि विकास दिर्घजीवी नहुने भएकोले शिक्षाको विकाशका लागि थप प्रकृया अघि बढाईने आफनो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि उनले गुणस्तरिय र प्राविधिक शिक्षाको विकासलाई जोडदिदै बेरोजगारी समस्या समाधानको विषयलाई पनि उनले प्रतिबद्धता पत्रमा जोड दिएका छन् । त्यसका लागि बेरोजगार युवाहरुको छुट्टै तथ्याँक संकलन गरि उनिहरुको क्षमता विकास र विभिन्न सिपमुलक तालिम संचालन गरि कृषि उत्पादनलाई जोडदिने र तालीम प्राप्तहरुलाई नगरपालीका मार्फत सर्बसुलभ रुपमा क्रण दिने ब्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन गरिने छ ।
न्यौपानेले निर्वाचन जितेमा आगामी ५ बर्ष भित्र प्रत्यक नगरवासीका घर घरमा खानेपानीको धारा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले त्यसका लागि स्थानिय स्तरमा संभावित खानेपानीका मुहानको पहिचान गरि मुहान नभएका ठाउँहरुमा सुनकोशी तथा लिखु नदिको पानिलाई लिफटको माध्यमबाट घर घरमा पुर्याएर काकाकुल नगरबासिहरुलाई स्वच्छ खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि स्थानिय स्तरको अलाबा प्रदेश र संघिय सरकार संगको सम्बन्धलाई थप कसिलो बनाउँदै लंजाने र त्यसको दिर्घकालीन समस्या समाधान गर्न ब्यवस्था मिलाईने पनि उनले आफनो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस बाहेक उनले आफनो प्रतिबद्धता पत्रमा सबै वडाहरुलाई नगरमुकाम र सदरमुकाम जोड्ने बाटाहरुको स्तरोन्नोती गरि आबश्यक्ताका आधारमा बाह्रै महिना सहज रुपमा यातायातको साधन चल्न सक्ने ब्यवस्था मिलाईने कुरा पनि उल्लोख गरेका छन् । यसैगरि नगरपालीकाका सबै खाले गौरबका योजनाहरुलाईै निरन्तरता दिंदै,नगरपालीका भित्र रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्रहरुलाइ पनि प्रमुखताका आधारमा संरक्षण गर्दे अगाडि बढिने निति अबलम्बन गरिने कुरालाई पनि न्यौपानेले आफनो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
नगरको दिर्घकालीन विकासकालागि खानेपानी, सडक ,गुणस्तरिय शिक्षा,स्वास्थ रोजगारी,कृषि तथा पर्यटनको विषयलाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा न्यौपानेको ७० बुदे प्रतिबद्धता पत्रमा छ ।
नेपाली काँग्रेस रामेछापका पुर्व सभापति ,महाधिबेसन प्रतिनिधी हुँदै नेपाल किसान संघका केन्द्रिय महासचिबको समेत जिम्मेवारी सकुशल पु्रागरि सकेका न्यौपानेले जिल्लामा साधगि नेताको रुपमा आफनो पहिचान बनाएका छन् ।
उनले आफनो कार्यकालमा सदरमुकाम मन्थलीमा करिब ३ करोडको लागतमा नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमितिको आफनै भबन समेत निर्माण गरिदिएका छन् । सादा जीवन उच्च विचार र नैतिकवान नेताको रुपमा परिचित नेता न्यौपानेले पटक पटक जेल जीवन समेत विताएका छन् ।
परिवर्तनमै समाहित भएबापत उनका पीता पंण्डित राम प्रसाद न्यौपाने,पद्म शंकर अधिकारी,पंडित टंक नाथ पौडेल, लगायका अग्रजहरुले जयतु संस्कृतं आन्दोलनमा लागेवापत तत्कालीन राणा शासकले टाउकामा चारपाटा हानेर देश निकाला हुनु परेको थियो । कठिन परिस्थीतिमा पनि परिबर्तन र प्रजातान्त्रीक आन्दोलनलाई आफनो प्राण बायु जस्तै बनाएर निरन्तर राजनितिक यात्रामा लाग्दै आएका न्यौपानेको योगदानलाई यस पटक नगरवासीले पनि मुख्याँकन गर्नै बेला आएको जानकार हरुले बताएका छन् ।
रामेछापमा चुनाव प्रचारप्रसार तिव्र
जनता भ्वाइस calendar_today १७ बैशाख २०७९, 7:28 am
रामेछापमा चुनाव प्रचारप्रसारको क्रम बढेको छ । उम्मेद्वारहरू कार्यकर्ताको साथमा घरदैलो अभियानदेखी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै चुनावी अभियानमा लागेको छ ।
रामेछापमा नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी,नेकपा एकिकृत समाजवादी,राप्रपा लगायतका अन्य दलहरू पनि चुनाव प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन।
अहिले भोट माग्न गरिएको समय खर्च पहिले देखि नै नागरिकहरूका लागि खर्चेको भए राम्रो हुने पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष बताउछन् । उनि भन्छन् – नागरिकलाई अफ्ठेरो परेको बेला सकेको सहयोग गर्ने र विकासमुखि नेतृत्व चुन्न नागरिकहरूले सिकिसकेकाछन् । यो प्रचार त विधि पुर्याउन गरिएको मात्र हो ।
आफूले चुनाब जिते सरकारी सेवा सुविधा लिन्न, वडालाई समृद्ध बनाउछु- पुरी
जनता भ्वाइस calendar_today १७ बैशाख २०७९, 6:36 am
रामेछाप । मन्थली नगरपालिका–८ चिसापानीका नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार ओमप्रकाश पुरीले आफु निर्वाचित भए कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा नलिने बताएका छन् ।
पुरीले आफु वडाध्यक्षमा जीते आफ्नो वडालाई समृद्ध बनाउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका हुन् ।
आफनो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनीक गर्दै पुरीले भनेका छन् चिसापानी धर्म संस्कार संस्कृती र भुगोलले सम्पन्न हुदा हुदै पनी यस अघिका जन प्रतिनिधीका कारण गाउँको समृद्धिमा बाधा पुगेको पनि पुरिले बताएका छन् ।
लिखित प्रतिबद्धता मार्फत आफ्ना भावि कार्ययोजना अगाडि सार्दै वडाध्यक्षका उम्मेद्वार पुरीले आफु विजयी भए त्यस बापत पाउने सरकारी सुविधा लगायतको कुनै पनि रकम नलिने भन्दै त्यस वापत आउने रकम वडाका दलित तथा विपन्न बालबालिकाको पढाइमा सहयोग गर्ने घोषणा समेत गरेका छन् । उनले वडालाई नमूना वडाको रुपमा विकास गर्ने योजना आफूसँग मात्रै रहेका भन्दै आफु वडाध्यक्षमा निर्वाचत भए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, रोजगार र भौतिक संरचनाका कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने पनि आफनो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
पुरीले वडालाई नमूना बनाउन अगाडि सारेका योजना
मन्थली नगरपालिका वडा नं. १ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच तालमेल
जनता भ्वाइस calendar_today १७ बैशाख २०७९, 6:14 am
रामेछाप । मन्थली नगरपालिका वडा नं. १ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच चुनाबी तालमेल हुने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्षको उम्मेद्वार बनेका श्याम कुमार श्रेष्ठले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएर कांग्रेसबाट अध्यक्षको उम्मेद्वार बनेका होम प्रसाद पौडेल (रामहरी)लाई सघाउने गरी दुई पार्टी बीच तालमेल भएको हो ।
तालमेलको सहमती भएसंगै शुक्रबार दिउँसो माओवादीबाट अध्यक्षको उम्मेद्वार बनेका श्याम कुमार श्रेष्ठ, सहित खुल्ला सदस्य मिन प्रसाद घिमिरे र महिला सदस्य कमला पाख्रिनले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन् । त्यस्तै कांग्रेसबाट खुल्ला सदस्यको उम्मेद्वार बनेका रत्न बहादुर श्रेष्ठ र दलित महिला सदस्यको उम्मेद्वार मिश्रा रसाइलीले समेत उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन् ।
पाँच जना उम्मेद्वारले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिएपछि अब नेपाली काँग्रेसबाट अध्यक्षको उम्मेद्वार रहेका होम प्रसाद पौडेल, खुल्ला सदस्यको उम्मेद्वार चन्द्र बहादुर माझी र महिला सदस्य तिज कुमारी भुजेलको मात्रै उम्मेद्वारी कायम रहेको छ । त्यस्तै माओवादीबाट खुल्ला सदस्यमा उम्मेद्वार रहेका युवराज सुवेदी र दलित महिला सदस्य मैया लक्ष्मी सार्कीको उम्मेद्वार कायमै रहेको छ । यसरी कायम रहेका पाँच जना उम्मेद्वारलाई जिताउन दुबै पार्टीले संयुक्त रुपमा मतदान गर्ने सहमति भएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ ।
दुई पार्टीको संयुक्त समूहलाई जिताउन दुबै पार्टी लाग्ने नेकपा माओवादी केन्द्र मन्थली नगरपालिका वडा नं १ का अध्यक्ष श्याम कुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार वडामा दुई पार्टी बीच तालमेल भएपनि नगरपालिकामा भने दुबै पार्टीको छुट्टा छुट्टै उम्मेद्वार कायम रहेकाले आ–आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
एमालेको तर्फका लिखुगाउँपालिका अध्यक्षका उमेदवार विष्टले दुईवटा नागरिकता लिएको तथ्य भेटियो
जनता भ्वाइस calendar_today १४ बैशाख २०७९, 10:58 am
ओखलढुङ्गा जिल्लाको लिखु गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उमेदवार (एमालेको तर्फबाट) विष्टले दुईवटा नागरिकता लिएको तथ्य फेला परेको छ ।
विष्टले ओखलढुङ्गावाट १८३५/४५४ नम्बरको होम बहादुर विष्टको नाममा र काठमाण्डौंवाट २७१७६२/०५१/९४६८ नम्बरको मिलन विष्टको नाममा नागरिकता लिएको प्रमाण फेला परेको छ ।
सोहि पालिकाका नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष पदका उमेदवार अशोक कुमार कार्कीले विष्ट विरुद्ध यस्तो प्रमाण बुझाएका छन् ।
अध्यक्ष पदका उमेदवार विष्टलाई आवश्यक प्रमाण सहित बैशाख १५ गते दिउसो २ बजेसम्म सफाई पेश गर्न भनिएको लिखु गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत राजेश कुमार थापाले जानकारी दिए ।
आरोपित पक्षले सफाई पेश गरेमा त्यस उपर छलफल पश्चात र नगरेमा सोहि अनुसार १५ गते बेलुकी सम्म उजुरिका विषयमा अन्तिम निर्णय हुने पनि थापाले जानकारी दिए ।
उजुरीको बारेमा थप अनुसन्धान भैरहेको समेत निर्वाचन अधिकृतको थापाले बताए ।
जेठ १ देखि हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय
जनता भ्वाइस calendar_today १४ बैशाख २०७९, 9:43 am
काठमाडौं – नेपाल सरकारले जेठ १ देखि लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ १ देखि लागू हुने गरी शनिवार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको हाे ।
सातामा एक दिन बिदा थप्दा इन्धनमा हुने करोडौँ रुपैयाँ घाटा कम हुनुका साथै महँगीमा इन्धन आयातसमेत घट्ने भन्दै आयल निगमले आइतबार पनि बिदा दिने प्रस्ताव केही समय अघि अघि सारेको थियो ।
२०४७ सालमै अदालतमा सातामा २ दिने बिदाको चलन केही समय अभ्यास गरिए पनि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै २ दिन बिदा दिन सिफारिस गरेको थियो ।
लिखु गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उमेदवारी दिएका मिलन विरुद्ध दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी
जनता भ्वाइस calendar_today १४ बैशाख २०७९, 9:33 am
ओखलढुङ्गा। नेकपा एमालेको तर्फबाट ओखलढुङ्गा जिल्लाको लिखु गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उमेदवारी दिएका मिलन विष्ट विरुद्ध दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी परेको छ ।
उमेदवारी दर्ताको भोलिपल्ट मंगलबार उमेदवारको विरुद्धमा दाबी विरोध गर्ने समय रहेकोमा एमालेवाट अध्यक्ष पदका उमेदवार विष्टले दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी परेको हो ।
विष्टले दोहोरो नागरिकता सँगै उनी विरुद्ध बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दासमेत कायमै रहेको उजुरीमा दाबी छ । विष्टले ओखलढुङ्गा ठेगाना राखेर काठमाडौंबाट मिलन विष्ट नाम गरेर नागरिकता लिनुका साथै ओखलढुङ्गाबाटै होमबहादुर विष्टको नाममा गरि दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै उजुरी परेको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्षका विरुद्धमा उजुरी परेको विषयलाई लिखु गाउँपालिकाका निर्वाचन अधिकृत राजेशकुमार थापाले उजुरी परेको पुष्टि गरेका छन् । उजुरीको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको लिखु गाउँपालिकाको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
उमेदवारी दिएका व्यक्तिको विरुद्धमा उजुरी दिदा सोहि पदका अर्का उमेदवार वा निजले तोकेको आधिकारीक व्यक्तिले मात्र उजुर गर्न पाउने निर्वाचन आयोगको कानूनी प्रावधान छ । सोहि प्राबधान अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसबाट लिखु गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमै उम्मेदवारी दर्ता गराएका अशोक कार्कीले उजुरी दिएका हुन् ।
त्यस्तै लिखु गाउँपालिकाका अन्य केहि वडा अध्यक्षका विरुद्धमा समेत उजुरी परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ओखलढुङ्गाले जनाएको छ । वडा अध्यक्षका उमेदवार केही नेपाल सरकारको कालो सूचिमा रहेको तथा केहि ठेक्कापट्टामा संलग्न रहि बेरुजु रहेको उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ । उनीहरुको बारेमा समेत अनुसन्धान भैरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
एमाले भटौलीमा पहिरो, एकै पटक ३९ नेता – कार्यकर्ताहरुको सामुहिक राजिनामा
जनता भ्वाइस calendar_today १४ बैशाख २०७९, 8:28 am
रामेछाप । नेकपा एमाले रामेछापका जिल्ला कमिटी सदस्य शिवहरी उप्रेती र मन्थली नगरकमिटी सदस्य सुर्दशन प्रसाई सहित नेकपा एमालेका ३९ जना नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सामुहिक राजिनामा दिएका छन् । उनिहरूले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राजिनामा दिएका छन् ।
यहीँ वैशाख ३० गते हुने स्थानिय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेकपा एमाले रामेछापले वडा कमिटीमा छलफल नै नगरी वडाका केही व्यक्तिहरु मात्रै राखेर टिकटको बिषयमा छलफल चलाएकोमा सहभागी मध्ये २० जनाले छलफल बहिष्कार गरेर हिडेका थिए । छलफलमा भाग नलिई बाहिरीएका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको मतलव नै नराखी ५ जनाले वडा अध्यक्ष लगाएतका अन्य सदस्यहरुलाई उम्मेदवार वनाउने भन्ने निर्णय गरेपछि भटौलीमा रहेका एमालेका अन्य कार्यकर्ताहरु पार्टीप्रति आक्रोसित बनेका हुन् ।
यस अघि नेकपा एमाले रामेछापको अधिवेशनमा पनि नेकपा एमालले भटौलीका कार्यकर्ताहरुलाई पार्टी कमिटीमा सम्मानजनक पद नदिएको भन्दै कार्यकर्ताहरुमा नैराश्यता छाएको थियो । नेकपा एमालेले भटौलीमा रहेका कार्यकर्ताहरुको भावना अनुसार कुनै पनि काम गर्न नसकेको र पार्टी पंक्ती व्यक्ति प्रति हावी भएको भन्दै भटौलीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नेकपा एमाले पार्टी छाड्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
डोल्पाका दुई जना गाउँपालिका अध्यक्ष एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश
जनता भ्वाइस calendar_today ६ बैशाख २०७९, 4:02 am
डोल्पाका दुई जना गाउँपालिका अध्यक्षले नेकपा एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्।
०७४ को स्थानीय चुनावमा एमालेबाट उम्मेदवार भई काईके गाउँपालिका र छार्का ताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका हुन् ।
गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित अंगतकुमार राना र सेनाङ गुरूङले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबारदेखि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेको उल्लेख गरेका छन्।
राना काईके गाउँपालिका अध्यक्ष र गुरूङ् छार्का ताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् ।
राना एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य समेत थिए।
कांग्रेसले गर्यो विश्वप्रकाशको नेतृत्वमा प्रदेश डेस्क स्थापना
जनता भ्वाइस calendar_today ६ बैशाख २०७९, 3:52 am
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश डेस्क स्थापना गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समन्वय गर्ने गरी प्रदेश डेस्क स्थापना गरेको हो ।
स्थानीय तहको चुनाव प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी छ प्रदेश डेस्कलाई दिईएको छ ।सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार डेस्क स्थापना गरेका हुन्।
कांग्रेसले सहमहामन्त्रीहरूलाई प्रदेशसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिईएको छ।
प्रदेश नम्बर १ मा सहमहामन्त्री जीवन परियार, मधेशमा भीष्मराज आङ्दम्वे, बागमतीमा फरमूल्लाह मन्सुर, गण्डकीमा महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, लुम्बिनीमा महेन्द्र यादव, कर्णालीमा बद्री पाण्डे र सुदूरपश्चिममा किशोरसिंह राठौरलाई जिम्मेवारी दिइएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
गठबन्धनले मत बदर हुने सम्भावना
सरु श्रेष्ठ calendar_today ६ बैशाख २०७९, 3:29 am
स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयसहित सत्ता गठबन्धन बैंठकमा व्यस्थ छ । कतिवटा पालिका आफ्नो भागमा पार्न सकिन्छ भन्ने योजनाका साथ सबै राजनीतिक पार्टीहरू भागदौडमा छन् । भागबण्डाकै कुरा नमिल्ला गठबन्धन टुट्ने होकी भन्ने आशंका सहजै सबैले गर्न थालेका छन् । गठबन्धन गरेकै भरमा गठबन्धनले सोचे जति, आँकलन गरे जति मत आउँछ र छलाङ मार्छन् भनेर सहजै भन्न सकिने अवस्था छैन । गठबन्धनले पठाएको प्रतिनिधिहरू कस्तो आउँछन् र अहिले गठबन्धन भए पनि यो गठबन्धनले दिगो सरकार र स्थानीय विकासमा पनि गठबन्धत भएर काम गर्छन् त भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।
खैर, गठबन्धन होला नहोला वा गठबन्धन पछि आउने जन प्रतिनिधिको एकतात्मक कार्य कहिलेसम्म रहला नरहला । त्यो भविष्यले नै बताउला । यता कुरा जोडौ मतको, बदर मतको । स्थानीय निर्वाचन २०७४ लाई फर्केर हेर्ने हो भने चुनावी गठबन्धनको धेरै भन्दा धेरै मत बदर भएको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण काठमाडौं महानगरलाई लिन सकिन्छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा एमाले र राप्रपा चुनावी गठबन्धन साथ २०७४ को स्थानीय चुनावमा मैदानमा उत्रिएको थियो । त्यहाँ एमालेका उम्मेदवारले नगरप्रमुख त जित्यो तर राप्रपाका नगर उपप्रमुखका उम्मेदवारले हार व्यहोर्नु प¥यो । चुनावी तालमेल अनुसार राप्रपाले सहयोग गरेको उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्य नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएर ५ वर्ष बिताए यता एमालेले सघाएको उपप्रमुखका उम्मेदवार राप्रपाका राजाराम श्रेष्ठ पराजित भएर महानगरको बागडौरको सपना तुहाए ।
यो चुनावमा पनि मतपत्र बदरको घटना नहोला भन्न सकिन्न । मतपत्र बदर हुनुमा निर्वाचन आयोग मात्र जिम्मेवारी रहन्न । गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने राजनीतिक दलले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई भुल्न हुँदैन । आफ्नो दलको भोट बदर हुनबाट जोगाउनु दलकै जिम्मेवारी रहन्छ ।
यसरी हेर्दा मतदाताले गठबन्धनको मर्म नबुझेको प्रष्ट देखिन्छ । दलीय गठबन्धनका अनुसार मतदाताले उपमेयरमा राप्रपालाई भोट दिनुपर्ने थियो तर त्यसो भएन । मतदाताले सूर्य चिन्हमा भोट दिए । जसको फलस्वरुप झन्डै १५ हजार मत सूर्य चिन्हमा गएका कारण बदर भएको थियो र राप्रपाका उम्मेदवारले हारेको थियो ।
स्थानीयतहको चुनाव २०७९ का लागि त्यस्तै गठबन्धनमा कुदेको ५ दलीय गठबन्धनले काठमाडौंको नतिजालाई भुल्न भने हुँदैन । राजनीतिक दलहरूले गरेको गठबन्धनको मर्मलाई जनता सामु पु¥याउन नसके गठबन्धनको औचित्य देखिदैन । यो चुनावमा पनि मतपत्र बदरको घटना नहोला भन्न सकिन्न । मतपत्र बदर हुनुमा निर्वाचन आयोग मात्र जिम्मेवारी रहन्न । गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने राजनीतिक दलले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई भुल्न हुँदैन । आफ्नो दलको भोट बदर हुनबाट जोगाउनु दलकै जिम्मेवारी रहन्छ । चुनावी गठबन्धन नहुँदा भोट मात्रै मागेर पुग्थ्यो तर चुनावी गठबन्धन भयो भने राजनीतिक दलहरूले भोट मात्रै मागेर पुग्दैन । दलहरूले नमुना मत पत्रका साथ गाउँगाउँ टोलटोल अनि घरघर गएर गठबन्धनको औचित्य र आपूmले गरेको गठबन्धनको विश्वास दिलाउँदै सही तरिकाले भोट कहाँ कसरी हाल्ने भनेर आफ्ना मतदातालाई पनि बताउनुपर्छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा “हतारको काम लतरपतर” भन्ने उखानले न्याय पाउँछ । गठबन्धनको कुरा नमिल्दा र समयमै उम्मेदवार तय नहुँदा पनि मतपत्र बदर हुने सम्भावना देखिन्छ । स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार पछि तय हुन्छ तर मत पत्र अगाडि नै छापिन्छ । चुनावमा उम्मेदवार नै नभएको दलहरूको समेत चुनावी चिन्ह सामेल हुनाले मतदातामा अन्यौलता छाउने प्रष्ट देखिन्छ ।
हुन त निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा राम्रै खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह चुनावमा मतदाता शिक्षाका लागि २४ करोड खर्च गर्दैछ । त्यसमध्ये ९ करोड मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालनका लागि खर्च गर्नेछ । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा निर्वाचन आयोगले गरेको मतदाता शिक्षा अन्तर्गतको खर्चको खासै राम्रो नतिजा देखिदैन ।
हुन त गठबन्धन मात्रै मत बदर हुनुको मुख्य कारण होइन । यदि मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको मतपत्र भएमा, निर्वाचन सञ्चालन ऐनको दफा ३६ को उपदफा २ अनुरुप मतदान चिह्न नभएमा, अर्थात उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमा स्पष्ट मतदान चिन्ह नभएमा, मतपत्र धेरै खुम्चेर या च्यातिएर बुझ्न नसक्ने अवस्थामा भएमा, मतपत्र धमिलो या फोहोर भई मत बुझ्न वा ठम्याउन सक्ने अवस्थामा नभएमा, उम्मेदवारको निर्धारित चिह्न भन्दा बाहिर मत चिह्न भएमा, कुनै उम्मेदवारको चिह्न नभएको खाली ठाँउमा मत चिह्न भएमा, मतदान नगर्ने शर्तमा निर्वाचन अधिकृतलाई फिर्ता दिएको मतपत्र भएमा, एकभन्दा बढी उम्मेदवारको चिह्नमा मत चिह्न भएमा, निर्वाचन आयोगले तोकेको बाहेक अन्य कुनै मतपत्रमा मत खसाइएमा, मतपत्र यदि मतपेटिका भन्दा बाहिर पाइएमा, फर्जी मतपत्र पाइएमा पनि मतपत्र बदर हुने गर्दछ ।
हुन त निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा राम्रै खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह चुनावमा मतदाता शिक्षाका लागि २४ करोड खर्च गर्दैछ । त्यसमध्ये ९ करोड मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालनका लागि खर्च गर्नेछ । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा निर्वाचन आयोगले गरेको मतदाता शिक्षा अन्तर्गतको खर्चको खासै राम्रो नतिजा देखिदैन । निर्वाचन आयोगले गरेको मतदाता शिक्षाको खर्चले सही नतिजा नदिदा धेरै मत बदर भएको देखिन्छ ।
मत बदर कम गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय उपकरणको प्रयोगले मत बदर रोकिने विज्ञहरूको समेत राय देखिन्छ । आधुनिक प्रविधि अर्थात् भोटिङ मेसिनको प्रयोगले मतदान थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
ठूलो संख्यामा मत बदर भइरहे पनि राजनीतिक दलले यो विषयमा खासै चासो देखाएको पाइदैन । दलहरूले राम्रोसँग मतदातालाई मतदाता शिक्षा दिएको पाइदैन । पार्टीले आफ्नो संयन्त्र राम्रोसँग परिचालन गर्ने हो भने मत बदर स्वतः घट्नेछ । हुन त यो विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रष्ट थाहा छ । तर पनि दलहरू आ–आफ्नै पारामा भुलिरहेका छन् । दलहरूले घरदैलो कार्यक्रम गरे पनि मतदाता शिक्षा दिने विषयमा कुनै चासो नराखेका कारण पनि धेरै मत बदर हुने गरेको पाइन्छ । दलहरू घरदैलो त जान्छन् तर कसरी भोट होल्ने हो भनेर कुनै दलले सिकाउँदैनन् । दलहरूले यो पटक पनि मतदाता शिक्षामा ध्यान नपु¥याउने हो भने यो पटक पनि धेरै मत बदर हुने देखिन्छ ।
२०७४ सालमा भएको तीनै तहका चुनावमा धेरै मत बदर भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३ दशमलव १८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ करिब ३ प्रतिशत मत बदर भएको आयोगको तथ्यांक छ । प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ मत बदर भएको थियो । त्यो खसेको मतको ९.८४ प्रतिशत हो । प्रदेश सभा तर्फ ५ लाख ६८ हजार १ सय ९१ मत बदर भएको थियो। जुन १४.८१ प्रतिशत थियो । तीनै तहको निर्वाचनमा २६ लाख १० हजार ९ सय ६८ मत बदर भएको थियो ।
दलहरूको गठबन्धनले मात्रै जीत सुनिश्चित हुने देखिदैन । गठबन्धन गरेका दलहरूले मतदातालाई मतदान सिकाउन नसक्नुले गठबन्धनलाई ठुलो घाटा हुने देखिन्छ । दलहरू गठबन्धन त गर्छन् तर मतदातालाई मतदाता शिक्षा दिन अल्छी गर्छन् । मतदाता शिक्षा दिन अल्छी गर्ने दलहरूले अब नयाँ मतदान प्रणाली अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । नयाँ युगसँगै नयाँ मतदान प्रणाली अपनाउने हो भने पनि मत बदर कम गर्न सकिन्छ । मत बदर कम गर्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय उपकरणको प्रयोगले मत बदर रोकिने विज्ञहरूको समेत राय देखिन्छ । आधुनिक प्रविधि अर्थात् भोटिङ मेसिनको प्रयोगले मतदान थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
रामेछापमा पनि स्थानिय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय
जनता भ्वाइस calendar_today २९ चैत्र २०७८, 12:21 pm
रामेछाप । सत्ता साझेदार पाँच दलिय गठबन्धनको संयुक्त बैठकले आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानिय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रमा पाँच दलिय संयन्त्रको बैठकले निर्णय गरेर जिल्लामा पठाएको पत्राचार अनुसार रामेछापमा पनि गठवन्धन बाटै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको हो । बैठकमा नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति रामेछापका पार्टी सभापति पूर्णवहादुर तामाङ (कान्छाराम), नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक मैनकुमार मोक्तान, नेकपा एकीकृत समाजबादीका अध्यक्ष रमेशकुमार बस्नेत र जनता समाजबादी पार्टीका संघीय परिषद सदस्य रोजबहादुर मोक्तान लगाएतका नेता तथा कार्यकर्ताहरु उक्त वैठकमा सहभागी रहेका थिए ।
पाँच दलिय गठवन्धनको बैठकमा सहभागी भएका नेताहरुले एकले अर्को पार्टीलाई प्रतिकुल असर पर्ने अभिव्यक्ति नदिने र पार्टी र व्यक्तिको अहित हुने किसिमको कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्ने, नगराउने निर्णय भएको छ । पाँचदलिय सयुक्त बैठकपछि नेताहरुले संयुक्त हस्ताक्षर सहितको विज्ञप्ती समेत प्रकाशन गरेका छन् । गठवन्धनमा रामेछापमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी सहभागी हुने छन् ।
स्थानिय तहको निर्वाचनमा रामेछापका ८ वटै स्थानिय तहमा पाँच दलिय गठवन्धन मार्फत निर्वाचन होमिने भनेता पनि कुन दलवाट कुन पालिकामा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने बिषयमा छलफल भइरहेको नेपाली काँग्रेस रामेछापले जनाएको छ । पाँच दलिय गठवन्धनले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन आजै देखी बैठक बसेर गृह कार्य गर्न थालिने नेपाली काँग्रेस रामेछापका सभापति पूर्णवहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले जानकारी दिए ।
मन्थली नगरपालिका ५ सुनरपानि कांग्रेसको उम्मेद्वार सर्वसम्मत,डा.मथुरा कार्की वडाअध्यक्षमा उठ्दै
जनता भ्वाइस calendar_today २२ चैत्र २०७८, 4:20 am
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाली काँग्रेसले मन्थली नगरपालिका वडा नं ५ सुनरपानीले वडाध्यक्षको उम्मेदबार सर्वसम्मत टुंग्याएको छ । नेपाली काँग्रेस वडा समिती बैठकले डा.मथुरा कार्की लाई वडाध्यक्षको उम्मेद्बार बनाउने निर्णय गरेको हो ।
५ वर्षसम्म पनि सुनरपानीमा जनताले देखिने काम गर्न नसकेको भन्दै वडाअध्क्षका उम्मेदवार कार्कीले सुनरपानीको विकासका लागी आफु वडाअध्क्षमा उठेको बताए । कार्की नेपाली कांग्रेस मन्थली नगरपालिकाका नगर सदस्य समेत हुन ।
एमाले संग गठबन्धन हुन सक्छ -कमल थापा
जनता भ्वाइस calendar_today २१ चैत्र २०७८, 12:40 pm
रामेछाप । आगामि निर्वाचनमा नेपालकम्युनिष्ट पार्टी एमाले संग सहकार्य हुन सक्ने राप्रपा नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष कमल थापाले बताएका छन् । मन्थलीमा आयोजित पार्टिका अगुवा कार्यकर्ताहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा थापाले भने- अहिले परिस्थितिले राप्रपा नेपाल एक्लै निर्वाचनमा जाँदा सोचेजति परिणमा ल्याउन नसक्ने भएकोले त्यसका लागि एमाले संग मिलेर जाने आन्तरिक तयारीपार्टीले गरिरहेको छ ।
मुलुक तहस नहस भएको नै क्रान्तिकारी भनाउँदा पार्टिहरुको अविबेकपूर्ण काम गराईका कारण भएको थापाको भनाई छ । विगत १५ बर्षको विचमा राप्रपा नेपालबाट पनि केहि गल्ति कम्जोरी भएको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि राप्रपा नेपालको नेतृत्वमा आफु रहेको हैसियतले आफुलाई नेपाली जनता संग माफि दिन पनि आग्रह गरे ।
आफनो पार्टि मुलुकको बैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाउँदै गर्दा काम गर्ने क्रममा केहि कम्जोरी भएकोले त्यसका लागि पनि आफुले नेपाली जनताका विचमा पुगेर माफि माग्नुनै उचित हुने भन्दै उक्त सन्देस लिएर आफु मन्थली आएको पनि उनले बताए । परवर्तनलाई साकार पार्नका लागि आफु पनि पछी राप्रपामा समाहित भएको र उक्त पार्टिमा पनि आएको सैद्धान्तिक विचलनका कारण आफुले राप्रपा नेपाललाई पुर्नगठन गर्नु परेको पनि थापाले वताए ।
राज संस्थाको गल्तिका कारण पछिल्लो पटक आफनो पार्टिले राजसंस्थाको एजेण्डालाई स्थगित गरेको भन्दै नेपालको ईतिहासमा राजसंस्थले पुर्याएको योगदानको भने आफनो पार्टिले सदैब सम्मान गर्नै पनि थापाले बताए ।
राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र कडेलको अध्यक्षतमा भएको उक्त कार्यक्रममा पार्टिका केन्द्रिय उपाध्यक्ष लाक्पा तामांग,महामन्त्री राजाराम गर्ताेला लगायतका बक्ताहरुले पनि बोलेका थिए । भेलामा करिब ३० जना युवा युवतिले विभिन्न पार्टिबाट विद्रोह गरि राप्रपा नेपालमा प्रबेश गरेका थिए ।
हावाहुरी र वर्षाले गाउँ तहसनहस
जनता भ्वाइस calendar_today २१ चैत्र २०७८, 12:35 am
रामेछाप । शनिवार राति चलेको हावाहुरी र वर्षाले गाउँ नै तहसनहस बनाएको छ । बेलुका करीब ७ बजे तिर चलेको हावाहुरी र वर्षाले २५ वटा भन्दा बढी घरको पुरै छाना उडाएको छ भने १ सय ५० भन्दा बढी घरका केहिमात्रामा छाना उडाउनका साथै घरमा समेत क्षती पुगेको छ । हावाहुरिका कारण एक जना घाइते भएका छन् । घाइते भएकी ६५ बर्षिय बोध कुमारी बोहोरालाई शनिबार राती नै उपचारको लागी मन्थली लगिएको स्थानिय संतोष सोडारीले बताए ।
हावा हुन्डरी संगैको वर्षाले घरमा भएको धान मकै कोदो गहुँ लगाएत अन्न बाली सबै भिजेको छ ।केहि अन्न पानीले भिजेका कारण कामै नलाग्ने भएको छ । हुरिले ३ वटा पसलको छाना उडाउदा पसलमा रहेको समान भिजेर नष्ट भएको दिलिप बुढाथोकी बताउँछन् । दिलिप बुढाथोकी भन्छन – दुखसुख गरेर जोरजाम गरेको पैसाले सानो व्यवसाय सुरु गरेका थियौ, त्यो पनि दैवले देखि सहेन । अब फेरि कसरि सुरु गर्नु यो व्यवसाय ?
हुरिका कारण ४ सय बर्ष भन्दा पुराना रुखहरु समेत उखालिएको छ ।गाउँमा रहेका धेरै रुख बिरुवाहरुको हागाँ भाँचिएर घर थिचेको छ भने सडक समेत अवरुद्ध बनेको छ । आफुले थाहा भए देखि यस्तो हावाहुरि नआएको ९१ वर्षीय जयलक्ष्मी श्रेष्ठ बताउँछिन । श्रेष्ठ भन्छीन् – राती उडाएर लैजाला जस्तो गर्यो । धेरै डर पनि लाग्यो । हुरि र वर्षाले घर लडाएर थिच्ला जस्तै गर्यो । सोँचे आज मरिन्छ । तर बाँचियो । बिहान उठेर यता उता हेर्दा त घरका छानाहरू केहि बाँकी रहेनछ ।
हुरिका कारणले गेलुका नागरिकलाई परेको पीडा प्रति मन्थली नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेशकुमार बस्नेत दुख व्यक्त गरे । उनले भने – नगरपालिकाले क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गरिसकेको छैन । भोलि सम्म नगरले विवरण संकलनको काम सक्नेछ । आफ्ना नागरिकको यो पीडामा मल्हम लगाउने गरि नगरपालिका सहयोग गर्न तयार छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, र सशस्त्र प्रहरी बल रामेछापको टोलीले उद्दार गर्नको साथै घर घरमा गएर घट्नाको बिबरण संकलन गरिरहेको प्रहरि नायब उपरिक्षक राजकुमार थिङले बताए ।
रेडक्रस रामेछापका मन्त्री जयप्रकाश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको रेडक्रसको टिमले पिडितको घर घरमा गएर त्रिपाल बाँडेको छ । हाललाई छानो नहुने परिवारका लागि केहि राहत पुगोस् भनेर तत्काल त्रीपाल दिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
खानेपानी प्रमुखको लापरवाहीले सेवाग्राहीलाई सास्ती, प्रशासन बेखबर
Kumar Shrestha calendar_today १२ चैत्र २०७८, 9:55 am
रामेछाप । खानेपानी सरसफाई डिभिजन नं ४ का कार्यलय प्रमु हुपेन्द्रराज जोशी कार्यलयमा उपस्थित नहुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती परेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारले सिन्धुली र दोलखा जिल्लालाई समेत पायक पर्ने गरी रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा कार्यालय स्थापना गरी काम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । मन्थलीमा रहेको डिभिजन नं. ४ को कार्यालय ३ जिल्लाको सेन्टर केन्द्रमा भएपनि प्रमुख कहिल्यै कार्यालयमा बस्दैनन् ।
खानेपानी सरसफाई डिभिजन नं ४ मन्थलीका प्रमुख बनेर जोशीले जिम्मेवारी त लिए तर त्यस पश्चातका दिनमा उनि कहिल्यै कार्यालय नै आएनन् । उनको यो रवैयाले कामको शिलशिलामा आउने सेवाग्राहीहरुले पटकपटक रित्तोहात फर्कनु परेको पनि नागरिकहरुको गुनासो रहेको छ ।
प्रमुख जोशी कार्यालयमा नबस्दा कार्यालयमा काम गर्न आउने सेवाग्राहीहरु समस्यामा परेको मन्थली नगरपालीका १ का सेवाग्राही प्रबल सुवेदीले बताए । प्रायः कार्यालयमा बस्न नरुचाउने प्रमुख जोशी सेवाग्राहीहरुको गुनासाहरुबाट छलिन र तनावमुत्त हुन मुख्य कार्यालयको कामलाई वेवास्ता गर्दै साइट अफिसमा बस्ने गरेका छन् । प्रमुख नहुँदा आफू जस्ता सयौ सेवाग्राहीले अनावश्यक रुपमा दुःख पाउनु परेको पनि सुवेदी बताउँछन् । उनी भन्छन् – गाडीमा ओहोरदोहोर गर्दा सेवाग्राहीले गाडी भाडामा नै धेरै पैसा सक्दै आएका छन् । म मात्रै अहिलेसम्म कार्यालयमा आएर फर्किएको ३ पटक भैसक्यो तै पनि मेरो काम सकिएको छैन । म जस्ता धेरै सेवाग्राहीहरू दुर दराजबाट आउनु हुन्छ। उहाँहरूको पनि व्यथा यहि नै हो । कार्यालयमा पुगेर बुभ्दादा कर्मचारीहरूबाट जहिले पनि एउटै जवाफ आउँछ । सर कार्यलयमा हुनु हुन्न । यसको जवाफ कसले दिने । उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
आफ्नो पद र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै जोशीले आफ्नो जागिरलाई दिन कटनी मानो पचनी बनाएका छन्। उनले सेवाग्राहीहरुको समस्यालाई समेत चासो नराखी कार्यालयमा नबस्दा लक्षित कार्यक्रमसमेत अधुरो र अपुरो हुन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । जोशीको अनुपस्थितिका कारण कार्यालयको आन्तरिक काममासमेत ढिलासुस्ती हुने गरेको कार्यालय श्रोतले बताएको छ ।
जिल्लामा चालु आ.व.मा मात्र सशर्त अनुदान संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतका ५१ वटा र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका २९ वटा खानेपानीका आयोजना सञ्चालनमा आएका छन् । कार्यालय प्रमुखको अनुपस्थितिमा ती आयोजनाका कामहरुको निरन्तरतामा समेत समस्या आएको छ । प्रमुख नहूँदा योजनाको ईष्टमेट, छनौट, योजना तथा कार्यालय सञ्चालन र भुक्तानी तथा कार्यालयको दैनिक कामहरुमा पनि समस्या आएका लगायतका दर्जनौ गुनासाहरु आउने गरेका छन् । कार्यालयको समस्या र प्रमुख विरुद्धको आरोपका बारेमा प्रमुख जोशीसँग समन्वय गर्दा उनले आफू रामेछापको अलावा सिन्धुली र दोलखा जिल्लाको लागि पनि कार्यालय प्रमुख भएकोले र प्रायः साइट अफिसलाई पनि समय दिनु पर्दा मन्थलीको कार्यालयमा कम समय दिनु परेको बताउँछन ।
कार्यालय प्रमुखको यस्तो रवैयाले उपभोक्ताहरू मारमा परेको नागरिक अगुवा दीपक भट्ट बताउँछन् । उनि भन्छन् – कार्यलय प्रमुख कार्यालयमा नबस्ने रवैया अरू कार्यालयहरूमा समेत छन् । कार्यालय प्रमुखहरू कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुकदर्शक बनेर बसेको देखिन्छ । प्रशासन कार्यालयले नियमित अनुगमन नगर्नाले समेत यो समस्या आएको हो । कार्यालय प्रमुख नै कार्यालय नबसे पछि योजनाका भुक्तानी हुन सकेको छैन जसको प्रतक्ष असर उपभोक्ता समितिलाई परेको छ ।
यो विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकुमार पहाडी सँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनि सँग सम्पर्क हुन सकेन । उनि सँग सम्पर्क हुन नसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गीता गुरुङ सँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा कार्यालय प्रमुख कार्यालयमा आए नआएको बारेमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नै नभएको बताउँछिन् ।उनि भन्छिन्– कोरोनाको कारणले हामीले कार्यालयहरू नियमित अनुगमन गर्न सकेका छैनौँ । अब केहि दिनमा अनुगमन गरे पश्चात मात्र यो विषयमा बताउँन सकिन्छ ।
प्रभावकारी बन्दै जिल्ला अस्पताल रामेछापको प्रसुति सेवा
Kumar Shrestha calendar_today ३ चैत्र २०७८, 6:49 am
रामेछाप । जिल्ला अस्पतालले सुरु गरेको आकस्मिक शल्यक्रियासहितको प्रसुति सेवा प्रभावकारी बन्दै गएकोछ । अस्पतालले आकस्मिक शल्यक्रियासहितको प्रसुति सेवा सुरु गरे यता ५ जनाको सफल शल्यक्रियाद्वारा प्रसुति गराइसकेकोछ । अस्पतालले सेवा सुरु भएको १४ औँ दिनमा ९ जनाको सामान्य र ५ जनाको शल्यक्रियाबाट प्रसुति गराइएको जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।
शल्यक्रिया गरिएको सबै सुत्केरी आमा र बच्चाको अवस्था स्वस्थ रहेको डा. मनोजकुमार यादवले बताए । यादवका अनुसार अस्पतालमा जनशक्तिको भने अभाव रहेको छ । अस्पतालले करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर शल्क्रियाद्वारा प्रसुति सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । हालका लागि भने शल्यक्रिया सेवा सञ्चालनका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनमा रामेछाप नगरपालिकाले सहयोग गरेको यादव बताउछन् ।
जिल्लाकै अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रियासहितको प्रसुति सेवा सुरु भएपछि काठमाडौं जानु पर्ने बाध्यता हटेको मन्थली नगरपालिका वडा नं– १३ फुलासीकी करुणा अधिकारी बताउछिन् । जिल्लामै शल्यक्रियासहितको सेवा पाउँदा उनी खुशी छिन् ।आपूm छोरोको आमा बन्नु अगाडिको पल सम्झदै अधिकारी भन्छिन्– “आपूmलाई प्रसुती व्यथा लागेपछि श्रीमानले रामेछाप जिल्ला अस्पताल लानु भयो ।
सामान्य तरिकाले प्रसुति होला भन्नेमा ढुक्क थिए तर डाक्टरले शल्यक्रिया गर्नु पर्छ भने पछि धेरै डर लाग्यो । नयाँ नयाँ सुरु भएको शल्यक्रिया प्रसुति सेवा कस्तो होला ? मरिन्छकी झै लाग्यो । तर शल्यक्रियामा खटिनु भएको डाक्टर तथा नर्सहरूको आफ्नो कामप्रतिको लगावका कारण मेरो शल्यक्रिया सफल भयो ।”
त्यस्तै सोही अस्पतालमा शल्यक्रियाबाट प्रसुती भएकी लिखु गाउँपालिका– १ गैरीगाउँ ओखलढुङ्गाकी रीता कार्की पनि अस्पतालको सेवाबाट खुसी छिन् । रीताको श्रीमान् भन्छन्– “श्रीमती आमा र म बाबु बन्ने खुसी त थियो नै तर शल्यक्रिया नै गर्न पर्ने भए पछि खर्चको जोहो गर्न मुस्किल हुन्छ भन्ने त्राश मनमा थियो । तर रामेछाप जिल्ला अस्पतालले बिरामीलाई खानासहित सेवा दियो । मेरो खर्च भनेको ५–७ हजार मात्रै भयो ।”
जिल्ला अस्पतालले दिँदै आएको शल्यक्रियासहितको प्रसुति सेवा प्रभावकारी हुँदै गए पनि प्रसुति सेवाका लागि अत्यावश्यक ठानिएको रगतको भने अभाव हुने गरेको जिल्ला अस्पताल रामेछापका प्रमुख पवन शाक्य बताउछन् । शाक्य भन्छन्– “रेडक्रस रामेछापमा रगत स्टक नहुँदा चाहिने रगतका लागि सोही बखत रक्तदाता खोजेर रगतको जोहो गर्न पर्दा समस्या हुने गरेको छ । हुनत हामीले ब्लड बैंकको सेवा सुरु गर्ने कोसिस गरेका छौँ तर अस्पतालको स्रोतले अहिलेकै सेवा धान्न धौधौ छ । नेपाल सरकारले यो बारेमा केही सहयोग गरिदिए यसको समेत समाधान हुने थियो ।
यता रेडक्रस रामेछापका मन्त्री जयप्रकाश श्रेष्ठको भनाई भने छुट्टै छ । श्रेष्ठ भन्छन्– “हामीले लिएर राखेको रगतको आयु ३५ दिन हुन्छ । ३५ दिन नकट्दै हामीले हामीसँग स्टक भएको रगतलाई अन्य स्थानमा पठाउँछौ खेर नजाओस् भनेर । हामीले बेला बेलामा रक्तदान क्याम्प पनि चलाइरहेका छौँ तर रक्तदान गर्ने दाताहरूको कमी छ यहाँ । हामीसँग स्टक नभएकै बेला यस्तो समस्या आइपर्छ ।
अहिले जिल्ला अस्पतालमा विभिन्न सेवा सुविधाहरु थप भएसँगै सेवाग्राहीहरुको चाप पनि बढेको अस्पताल प्रशासन बताउँछ । जिल्ला अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बन्दै गएकोले रामेछापका नागरिकहरूलाई महङ्गो अस्पतालमा गएर पसिनाको कमाई सिध्याउने र ऋण गरेर उपचार गर्ने समस्यामा कमी आएको नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष बद्री नयाँघरे बताउछन् । नयाँघरे भन्छन्– “शल्यक्रियासहितको प्रसुति सेवाका लागि राजधानी धाउने समस्याबाट अब रामेछापका नागरिकले मुक्ति पाउनेछन् । जिल्लामा नै यस्तो सुविधा सम्पन्न अस्पताल हुनु रामेछापवासीको लागि खुसीको कुरा हो ।
चोरीको घटना बढेसँगै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन
जनता भ्वाइस calendar_today ३ चैत्र २०७८, 6:42 am
रामेछाप । जिल्लाको विभिन्न स्थानमा चोरीका घटना बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको छ । केही दिन यता जिल्लाका विभिन्न स्थानमा दैनिक रूपमा चोरी घट्ना बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ठूलो सङ्ख्यामाप ्रहरी परिचालन गरेको हो । घट्ना नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सीमानाकामा प्रहरीले सुरक्षा सर्तकासमेत बढाएको छ । प्रहरीले रामेछाप प्रवेश गर्ने नाकानाकामा चेक जाँचलाई कडाई गरेको छ ।
चोरीको घटना दिनदिनै बढेपछि अनुसन्धानमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख राजकुमार थिङ आफै गाउँगाउँमा गएर घट्नाको अनुसन्धानमा जुटेका छन् । रातको समयमा सडक आसपासको क्षेत्रमा चोरीको घटना बढेसँगै स्थानीयहरू पनि समूहबद्ध भएर चोरीमा संलग्नको खोजीमा जुटन सुरु गरेका छन् ।
दुई दिनकै अवधिमा जिल्लाको गोकुलगंगा गाउँपालिका र मन्थली नगरपालिकामा गरी झन्डै दुई दर्जन भन्दा बढी स्थानमा चोरी गरेर लाखौका धनमाल लगिएको छ । मन्थली नगरपालिकाका, गोकुलगंगा गाउँपालिकामा गरी १३ स्थानमा चोरी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मुख्य सडक आसपासका पसल, सहकारी संस्था तथा व्यक्तिका घरहरुमा चोरीको घटना केन्द्रीत छ । प्रहरीकाअ नुसार चोरहरुले पन्जा तथा मास्क प्रयोग गरेकाले पत्ता लगाउन कठिन भएको छ ।
डिएसपी थिङले चोरीका घटनामा संलग्नहरूको खोजीकार्यलाई तीव्रता दिएको बताएका छन् । प्रहरीले योजनाबद्ध रूपमा चोरीमा एउटै समूहको हातहुन सक्ने अनुमान गरेको छ । विगतमा पनि मन्थली नगरपालिका र गोकुलगंगा गाउँपालिका विभिन्न ठाउँमा चोरीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले लामो समयको अनुसन्धानपछि पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर मुख्य नाकाहरुमा सिसी क्यामेरा जडान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रहरीले सेलेघाट नाका, साँघुटार नाका लगायतको ठाउँमा सुरक्षा निगरानी बढाएको छ ।
शक्तिशाली महादेब स्थानापति मन्दिरमा सडक र सिँडी निर्माण
जनता भ्वाइस calendar_today ३ चैत्र २०७८, 6:40 am